Chigadzirwa Photography Services
kuti zvinoshanda sei
Kutenga Kudonhedza Inventory
Kudonhedza Branding & Yakavanzika Mavara
Kudonhedza Inventory Kuongorora
Kurumidza Kutumira Mitsara
Uchishandisa FulfillPanda's nyanzvi yekutora mifananidzo ichakubatsira iwe kuwedzera yako shanduko chiyero! Chigadzirwa kutora mafoto eCommerce mapuratifomu ndiko kwedu kugona kuChina-based studio. Tichaita nepatinogona napo kusangana chero chaicho chikumbiro.
❖ HERO PURE
Kana iwe uchida yepamusoro-yekupedzisira zvigadzirwa zvigadzirwa kutora mifananidzo, redu gamba kupfura ndizvo zvaunoda. Iyo yedu yekutanga chigadzirwa chigadzirwa chekutora mifananidzo, iyo inosanganisira zvese kubva kune yedu yakajairwa sevhisi pamwe yakawanda yakawanda yekubata-kumusoro uye zvirinani resolution.
Mheni dzekuvhenekesa, kudonhedza mimvuri uye kuratidzika, backdrops ane mavara, mamiriro emuchadenga, uye maonero anoshamisa ndiwo mamwe maitiro atinoshandisa kuvimbisa ako ekupedzisira zvigadzirwa mifananidzo ndizvo chaizvo zvaunoda.
❖ GHOST MANNEQUIN MIFANANIDZO
Mannequin ihungwaru yenguva imwe yekudyara iyo inokupa iwe kutarisa kwakaringana pasina kudikanwa kwemuenzaniso. Kana iwe uchingoda kuratidzira hembe dzako uye kwete iyo mannequin, shandisa chipoko mannequin. Tinogona kukubatsira kugadzira mannequins emweya unopa chipfeko chako, kunyangwe iwe uchida mubatanidzwa, ingori mutsipa, kana iyo yakazara mannequin.
EW JEWELRY CHIDZIDZO MUFANANIDZO
Yakanaka kwazvo zvishongo zvemifananidzo yechigadzirwa chimwe nechimwe chakakosha kuti uve nechokwadi chevatengi mufaro nekutengesa. Tinogona kukubatsira iwe mukuwedzera kutendeseka kwako uye nekugadzira hunyanzvi mamiriro. Yakakwirira-yemhando yezvishongo mafoto akakosha, kunyanya kana iwo mufananidzo uri izvo zvese zvinodiwa kutengesa chidimbu.
Isu tinopfura zvishongo mumwenje wakakodzera uye neyakafanira kumashure. Isu tinopa mhedzisiro huru nekugadzirisa zvikanganiso zvidiki zvinokanganisa kubva pahunhu hwese hwezvinhu zvako.
Kana iwe uchishuvira zvakasarudzika zvinodiwa kune chako chigadzirwa mapikicha, senge:
WithPikicha ine Model
UdioStudio ruoko muenzaniso
UdioStudio - Muchena Muchena
60360 Spin Vhidhiyo
Iwe unogona kuvimba nekuZadzisa Panda kuendesa zvakanakisa!
NEI KUZADZA PANDA?
Isu kuFulfill Panda tinopa mifananidzo yemhando yepamusoro inoratidza zvigadzirwa zvako nenzira inoita kuti vatengi vako vafarire.
FulfillPanda ine yakanakisa Photoshop Hora mhinduro uye nzira dzekuendesa shanduko mhedzisiro.
Tibvumire isu kuva vako nyanzvi! Tine studio yehunyanzvi yakashongedzerwa, pamwe nehunyanzvi hwekutora mifananidzo uye retouchers, kuti ikubatsire mukugadzira chinodiwa chigadzirwa kutora mifananidzo yekambani yako.
Taura nesu nekukurumidza!
Ndokumbira undiwedzere ne Skype:
MadeInParadiseCn YEMAHARA QUOTE IZVI!
Kwete 158 Kaiyuan Road, Jiangbei, Ningbo, ZheJiang, China 315033